Ahoana ny fomba fanaovana catapult kilalao an'ny ankizy - Ikkaro
firosoana >> Cómo hacer >> Catapult kilalao
Paompy hazo 2
Tsorakazo popsicle 2 (malalaka, toy ny an'ny dokotera)
lakaoly (raha azo atao lakaoly mafana)
Fehikibo fingotra 2, ny matanjaka kokoa no tsara kokoa
Catapult vita an-trano tsikelikely
Hamela kitay hazo eo ambony latabatra isika ary hasiantsika ireo tweezers sy ilay hazo faharoa raha jerentsika eo amin'ny sary
Raha vantany vao maina izy dia hametaka ny satrony 1cm amin'ny faran'ny tsorakazo faha-2. Avelantsika io elanelana io mba hahafahantsika manosika azy tsara any aoriana. Amin'izany fomba izany dia hihazona tsara kokoa ny rantsan-tanantsika
Mba handefasana dia apetrakay ilay jiro izay hampiasaintsika ao amin'ilay takelaka ary amin'ny tanantsika iray dia mitazona ilay tapa-kazo izay eo amin'ny tany isika ary amin'ny tanana iray hafa dia manamafy sy mamoaka tampoka isika
Jereo ny fisokafany rehefa mihetsika. Miangona amin'ny toerana 3 samihafa ny angovo:
ao amin'ny maodin'ny clamp mihitsy izay tsy maintsy mihidy,
amin'ny fatorana elastika izay mitazona mafy ny clamp
amin'ny famolahana ilay tapa-kazo
Izay projectile na bala ampiasaina
Tandremo izay atsipinao. Raha ao an-trano ianao, dia ampiasao zavatra izay tsy milanja firy toy ny baolina amin'ny alim-by. Mety izany.
Raha hitora-bato ianao, marbra na toy izany, avelao eny amin'ny habakabaka izany ary aza misy mahazo azy. Manary matanjaka lavitra noho izay azonao eritreretina. Tena. Kilalao kely adaladala nefa mamon-kery betsaka. Mihoatra noho ny nantenaina. Avelao izy ireo hilaza ny valindrihiko.
Ny fingotra amin'ny ankavia sy ilay eo afovoany dia manampy amin'ny fampitomboana ny herinaratra, ilay eo ankavanana tena mihena, fa izany no nitifiran'ny zanako vavy tsaratsara kokoa. Raha tsy voafehy kely izany dia olana aminao daholo ny manandrana.
Ity no vokatra farany.
Amin'ny maha-projectile ahy dia tiako ny mampiasa baolina vita amin'ny foilant aluminium, na dia afaka manandrana zavatra samihafa aza ianao. Mitandrema raha mampiasa marbra na zavatra milanja ianao satria manana tanjaka bebe kokoa noho ny toa azy.
Inona no azontsika hazavaina amin'izy ireo mifanaraka amin'ny taonany?
Tantaran'ny catapult, fahirano, ballistics, fitifirana parabola,
Momba ny catapult
Masinina ady iray izay mitahiry angovo hampita azy amin'ny projectile.
Ny catapult voalohany dia noforonin'ny Grika tamin'ny taona 399 talohan'i Kristy, novolavolain'ny Carthaginians ary notantanan'ny Romana, izay namadika azy ireo ho fitaovam-piadiana manimba amin'ny fahirano.
Niresaka momba ny karazana catapult hafa ao amin'ny bilaogy izahay ary miasa amin'ny atiny maro hafa aho
Nanomboka teo dia nampiasaina sy novaina izy ireo nandritra ny taonjato maro ka hatramin'ny taonjato faha-XNUMX. Ny karazana catapult rehetra dia noforonina. Saingy hamela ny tantaran'ny catapult isika ho an'ny lahatsoratra manokana izay omaniko.
Ny catapult romana dia afaka nitifitra vato 30 kg miala amin'ny 300 m.
Fanandramana ho an'ireo vao manomboka. LIBSA fanontana
Ny kanton'ny catapult. William Gurstelle
1 Catapult vita an-trano tsikelikely
2 Izay projectile na bala ampiasaina
3 Inona no azontsika hazavaina amin'izy ireo mifanaraka amin'ny taonany?
4 Momba ny catapult